umdlavuza wesibeletho eba amaseli EPITHELIAL we esibelethweni. Kufanele kuqashelwe ukuthi uma kungukuphikisana ezikhiqiza amaqanda ukukhiqiza esibelethweni emzimbeni yabesifazane futhi hormone, uma ukuthola ngasekupheleni izimila patsinetka ungalahlekelwa unaphakade ngekhono lokuhlala kombungu esibelethweni, ngisho ne yokwelashwa okuphumelelayo umdlavuza.
Ngakho-ke kubalulekile ukuba banake nokuvimbela lesi sifo, kanye ibhekane osomtry yezokwelapha njalo ezingaba ukubona umdlavuza wesibeletho e zisaqala yentuthuko.
Emdlavuzeni wesibeletho kungaba ngenxa
- yobudala, okuyinto kudlulwe engamashumi amahlanu;
- yokuntuleka izithelo nemifino eyanele;
- ukusetshenziswa eside ukuthaka imithi ngendlela ekhuthaza wenzalo;
- ukuhlupheka esikhathini esidlule yomdlavuza webele.
Komdlavuza ezikhiqiza amaqanda e Israyeli yakhiwa:
- ukuhlolwa onco-wezifo zabesifazane;
- ultrasound okhalo, eyenziwa nokusetshenziswa inzwa intravaginal isetshenziswa ngokusebenzisa odongeni peritoneum;
- Ukuhlolwa kwegazi ngoba khona isimila nakomaka kuwo;
--X-ray Ngokuphambene naphakathi ukusebenzisa;
- ngekhompyutha tomography;
--magnetic resonance imaging,
- positron ekushayweni tomography;
- biopsies (isifo ukuthola isinyathelo).
Sebenzisa nezikhungo zezokwelapha Israeli ka imishini yesimanje ukuze ihlolwe ivumela ukunquma ngokunembile kakhulu indawo umdlavuza futhi akuqede.
Ukwelashwa zomdlavuza wesibeletho kungenziwa kwenziwe Israyeli ngezindlela eziningana, okufanele kubandakanye lokhu: ukuhlinzwa, amakhemikhali kanye radiotherapy. Ukwelashwa Kwenziwa icubungulisise, kusukela ukusetshenziswa eyodwa kuphela indlela ukunakekelwa kungenzeka zingabonisi imiphumela emihle.
indlela Chemotherapeutic for wokwelapha isifo somdlavuza wesibeletho
ukwelashwa Chemotherapeutic yomdlavuza wesibeletho e Israyeli kuhilela ukusetshenziswa kwezidakamizwa cytotoxic ukuthi kubulawe amangqamuzana omdlavuza ngu weThrojani busuka vein kusetshenziswa indlela temlomo, kanye ngaphakathi komgodi peritoneal. Intravenous yokwelapha amakhemikhali ihlala amahora ambalwa, kulandelwa inkathi yokutakula emasontweni ambalwa ezayo. Ngokuvamile, lwalumumethe izifundo eziyisithupha ukuze athole ukwelashwa kwamakhemikhali. Lolu hlobo Ukwelapha ithatha ezinyangeni ezinhlanu.
Ngokuvamile, imiphumela emibi yokwelashwa ngamakhemikhali eyenziwe ekwelapheni umdlavuza e Israyeli ebekiwe emva kokuhlinzwa ukuvimbela ukubuya lesi sifo, lapho umdlavuza wesibeletho, noma has ngezinga eliphezulu isilinganiso umdlavuza.
isicelo preoperative ngamakhemikhali ukunqinda isimila ngokuthi neoadjuvant. Ngemva imijikelezo ezintathu noma ezine Kwenziwa scan CT okubonisa imiphumela ekulwisaneni nomdlavuza wesibeletho. Kulesi sigaba, ukunquma mayelana nokusetshenziswa ukuhlinzwa. Uma ukuhlinzwa wenziwa, asele imijikelezo ezimbili noma ezintathu iqondiswa ngemva kokuhlinzwa.
Lapho ukusatshalaliswa metastases ifinyelele ingaphakathi peritoneal futhi isibindi, kunqunywa nokwelashwa ngamakhemikhali njengoba indlela eyinhloko ekubhekaneni umdlavuza wesibeletho. Inhloso yayo ifakwa ohlwini isimila ukuncipha, kwentiwe lula izimpawu futhi sithuthukisa ubungqabavu lesiguli.
Ukusetshenziswa ukwelashwa begazi umdlavuza wesibeletho
Izifundo iye yabonisa ukuba ukuphumelela ukusetshenziswa ukwelashwa begazi izimila ezihilela ezikhiqiza amaqanda, lesi sidakamizwa "Avastin", okuyinto evimbela emdlavuzeni.
Beam uhlobo wokwelapha isifo somdlavuza wesibeletho
Radiotherapy kubhekwa kabanzi ukwesekwa ezihambisana ekwelapheni umdlavuza wesibeletho. Esikhathini izigaba ezimbili zokuqala, lapho kungekho ukusabalala e ngaphakathi komgodi ongaphakathi kwamathumbu yendawo yesimila esifundeni kwezitho zangasese kungakhonjiswa ngendlela ababelwe kuwo inkambo ukwelashwa ngemisebe emva kokuhlinzwa ukubulala asele amangqamuzana omdlavuza futhi kuvimbele ukubuya isifo. Inkambo sithatha amaviki amathathu noma amane, kahlanu ngesonto.
ukwelashwa ngemisebe liyasetshenziswa ukuze unciphise usayizi isimila nokwehlisa izimpawu.